Waxa la sameeyo marka Apple Watch uusan shidan ama uusan si fiican u shaqeyn | Wararka IPhone
Waxa la sameeyo marka Apple Watch uusan shidan doonin ama uusan si sax ah u shaqeynaynin
Ignacio Sala | | Apple Watch, Casharrada iyo buugaagta
Apple Watch waa qalab ay ka buuxaan dareemayaal iyo teknolojiyad aad u horumarsan oo ku shaqeysa qaab milimitir ah. Laakiin sidoo kale waa qalab ka mid ah iPhone, taas oo wuxuu noo ogolaanayaa inaan qabano hawlo kala duwan taasi haddii kale waxay nagu qasbeysaa inaan ka qaadno Apple Watch jeebka ama shandada. Laakiin qalab ahaan, waxaad la kulmi kartaa arrimaha waxqabadka. Dhibaatooyinka badankood ee maalin walba noo muuqan kara waxay leeyihiin xal fudud, gaar ahaan kuwa la xiriira marka shaashadda Apple Watch madow tahay. Laga soo bilaabo Actualidad iPhone waxaan isku dayeynaa inaan xallino dhibaatooyinka ugu caansan ee ka dhasha adoo adeegsanaya Apple Watch.
1 Dhibaatooyinka ku hagaaji Apple Watch
1.1 Apple Watch waxay leedahay shaashad madow
1.2 Apple Watch waxay muujineysaa shaashad madow laakiin waqtiga ayaa cagaaran
1.3 Apple Watch waxay muujineysaa shaashad madow oo leh waqti cagaaran iyo astaanta danab cas
1.4 Apple Watch waxay kubilaabaysaa shaashad madow waxaanan maqlaa codad
1.5 Shaashadda Apple Watch iyo badhannada waa kuwo aan jawaab celin bixin
1.6 Markaad daarto Apple Watch ma dhaafo tufaaxa
Dhibaatooyinka ku hagaaji Apple Watch
Haddii aad aragto dhibaato aan liiska ku jirin, ku qor faallooyinka waxaanan isku dayi doonaa inaan kuu soo bandhigno xalka.
Apple Watch waxay leedahay shaashad madow
Haddii shaashadda Apple Watch ay gebi ahaanba madow tahay oo badhamada Apple Watch ka jawaabi waayaan isdhexgal kasta, waxay u badan tahay in aaladdu way deminaysaa ama ma haysato batari ku filan sidii shaashadda looga muujin lahaa inay u baahan tahay in la raro si ay u shaqeyso.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ku riixnaa badhanka dhinaca oo aan sugno bal inaan aragno haddii Apple Watch uu shidan yahay. Haddii kale, waxaan dib u bilaabi karnaa adigoo riixaya badhanka dhinaca iyo giraangirta menu 10 ilbidhiqsi. Haddii habkani shaqeyn waayo, qalabku wuxuu leeyahay batteri gebi ahaanba madhan.
Apple Watch waxay muujineysaa shaashad madow laakiin waqtiga ayaa cagaaran
Haddii qalabkaagu muujinayo shaashadda madow, oo ay weheliso wakhtiga cagaaran oo aanu ka jawaabin mid ka mid ah badhannada dhinaca si loo siiyo menu-ka dalabka ama helitaanka dadka lala xiriirayo, Apple Watch wuxuu ku jiraa habka badbaadinta batteriga.
Habka badbaadinta baytarigu wuxuu noqon karaa gacanta ku dhaqdhaqaaq marka Apple Watch ay gaarto 10%. Xilligaas qalabku wuxuu na tusayaa farriin na ogeysiineysa inaan lacag ka qaadno ama aan dhaqaajino habka badbaadinta bateriga. Waqtigaas, qalabku wuxuu na tusi doonaa oo keliya waqtiga, luminta xiriirka taabashada aaladda, noqoshada saacad-saacadeed qaali ah.
Apple Watch waxay muujineysaa shaashad madow oo leh waqti cagaaran iyo astaanta danab cas
Haddii qalabkeenu na tuso shaashadda madow ee muujineysa waqtiga iyo astaan ​​leh shucaac guduudan gudaheeda, sida kiiskii hore, Apple Watch ayaa ku jira habka keydinta bateriga. Qaabkan, dhammaan isgaarsiinta iPhone-ka ayaa luntay, sidaa darteed waxaan hubin karnaa oo keliya waqtiga.
Qaabkan keydinta bateriga, isticmaalka saacadda ayaa yar, laakiin waxaa imaaneysa waqti goorta waa inaan rarnaa waana marka ay soo muuqato astaanta cas leh hillaac gudaha ah. Si aad uga bixi karto qaabka keydinta bateriga, waa inaad dib u bilowdaa aaladda adoo riixaya badhanka dhinaca iyo badhanka giraangirta si wada jir ah 10 ilbidhiqsi illaa ay calaamadda Apple ka muuqato.
Apple Watch waxay kubilaabaysaa shaashad madow waxaanan maqlaa codad
Haddii shaashadda telefishankayaga Apple Watch ay xidhan tahay laakiin waxaan maqalnaa codad ka yimid, is deji, ma nihin dad waalan, si fudud waxaan hawlgalinay ikhtiyaarka marin u helka codka. Si loo baabi'iyo waa inaan tagnaa barnaamijka Apple Watch ama guji shaaggan oo ka codsanaa Siri inuu ka joojiyo.
Shaashadda Apple Watch iyo badhannada waa kuwo aan jawaab celin bixin
Haddii qalabkeenu soo bandhigayo nuxurka, shaashadda ayaa daaran, laakiin kama heli karno inaan uga jawaabno shaashadda ama badhannada jirka, waxa ugu horreeya ee aan sameyn karno si loo saxo waa in dib loo bilaabo. Si tan loo sameeyo waa inaan ku riixnaa giraangirta dhinac wada jir ah badhanka Apple Watch muddo 10 ilbidhiqsi ah, illaa calaamada Apple Watch ay markale soo muuqato Haddii mar haddii aad saxday Apple Watch iyo shaashadda iyo badhamada ay wali ka jawaabi waayaan, xalka kaliya ayaa ah in aaladda loo qaado Apple Store.
Markaad daarto Apple Watch ma dhaafo tufaaxa
Haddii aan isku dayno inaan daarno Apple Watch-keena, laakiin aaladda ma dhaafayo tufaaxa ama ma joojinayso dib u bilaabiddeeda, waxa ugu horreeya ee aan awoodno isku day waa inaad dib ugu bilowdaa gacanta, adoo riixaya giraangirta dhinaca iyo badhanka Apple Watch 10 ilbidhiqsi.
Haddii qalabku wali ka gudbo dhismaha, waxa ugu fiican waa in la geeyo Apple StoreSababtoo ah sabab kasta ha noqotee, waxaa laga yaabaa in khadadka nidaamka kabaha uu sababo dhibaatooyin. Nasiib darrose kuma xirmi karno Mac-geena oo dib ayaan ugu dhejin karnaa qalabka guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Waxa la sameeyo marka Apple Watch uusan shidan doonin ama uusan si sax ah u shaqeynaynin
Aniga tayda, codsiyo badan ma furaan, xirmaan ama kuma sii jiraan goobada sugitaanka halkaasna kama dhacaan.
Miinadu waa isku mid waxaanan horeyba usameeyay warshad ku saabsan 3 jeer 3 bilood gudahood. Facebook Messenger weligeed dib uma furin tan iyo markaas.
Isla waxbaa igu dhaca aniga oo aan loo eegayn inta aan Apple waydiiyo, waxa ay sameeyaan oo dhan waxay ku eedeeyaan soosaaraha dalabka. Ukun dir.
Isku day inaad ka furto iPhone ka dibna aad ku soo celiso saacadda goobaha, hana ku shuban wax gurmad ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ka bilaabaysaa meel hoose.
Ku jawaab ZotXs
Aynu wajahno, inta badan barnaamijyada saacadaha ayaa u muuqda in si deg deg ah oo liita loo qorsheeyay (Iyo barnaamijyo badan oo aan wali la cusbooneysiinin WatchOS 2 weli). In kasta oo aynaan dhihi doonin saacaddu waa mid aad u dhakhso badan, barnaamijyada barnaamijyada hooyo ee sida wanaagsan loo baray ayaa si fiican u shaqeeya.
Dabcan, haddii aad tusaale kale u dhigto codsi aan shaqeynayn, laga yaabee inaan dareemo xoogaa naxariis badan, laakiin ka imid Facebook ... Inay sii wadaan inay naftooda u huraan barnaamijyada boggooda, oo ay ka baxaan barnaamijyada barnaamijyada dhabta ah, fadlan 😉
Jawaab ugu samee Watchmaker DosPuntoZero
Dhamaan ilaaliyaha saxda ah dospuntocero laakiin hadaan dib ugu laabano waxaan isku dayay IPhone kii ugu horeeyay markuu soo baxay oo aan laheyn wax dukaan codsi ah waxay bixiyeen taleefan taabasho laakiin waxay ahaayeen kuwo cusub, runta ayaa ah in Apple ay wali qasab ku tahay inay waxbadan ka cadaato Apple Watch. laakiin wali watchOS 2 waa mid aad u liita oo aan xasillooneyn. iyada oo waqtiga la dhaafayo taas odhan mayno.
Ku jawaab ZoltXs
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Dhibaatada Watch ee aan ku xirnayn codsiyada dhinac saddexaad, ayaa ah keyd. Ma jirto wax adeegsi ah dib u bilaabida saacadda, xalka kaliya ayaa ah in dib loo dhigo iPhone-ka oo ah nuqul cusub. Maaha xal dhammaystiran, illaa iyo markii la cusbooneysiinayo watchOS waxaan sii wadi doonnaa dhibaatada saacadahayaga isla marka aan isbeddel ku sameyno nuqulada otomaatiga ah, laakiin xilligan ay xallinayso
Jawaab Xabier Alonso
Si dhab loo ahaado, waa Apple oo SDK siisa API-yadeeda, haddii ay u shaqeyso sida dameerka, barnaamijyadu ma sameyn karaan wax yaab leh.
Waa shey aan dhammeyn, Apple wuu ogyahay isaga iyo kuwa horumariya sidoo kale, dhibbanaha waa isticmaalaha iibsaday. (Waa lagaa digay, ma fiicna in waligaa la iibsan nooca ugu horeeya ee wax uun ah)
Ku soo jawaab Webserveis
Dhibaatooyin isku mid ah ayaan qabaa tusaale ahaan: App-ka Soundhound wuxuu u shaqeeyaa si qumman, waxaan rakibay Shazam barnaamijkuna ma furi doono waana sida aysan u furin sanadaha qaar!
Waad salaaman tihiin asxaabteyda, waxaan dhibaato ku qabay in aysan ku dhicin tufaaxa tijaabooyin badan ka dib sida kaliya ee aan ugu guuleystey inaan uga baxo wareeggaas waxay ku jirtaa arjiga daawashada iPhone-ka ee qeybta koowaad ee Apple Watch ee aad gasho oo aad iska furto Apple Watch-kaaga. laga bilaabo iPhone ka dibna waxaad isku dayeysaa inaad lacag bixiso waxaadna bilaabaysaa adigoo riixaya taajka iyo badhanka awoodda isla markaa ilaa tufaaxu ka muuqdo
Waxaan rajaynayaa inay tani u adeegto sidii ay iigu adeegtay, in kasta oo aan leeyahay dhibaatooyin bullaacad bixiya.
Waxaan haystaa saacadda iPhone-ka markii la fasaxay, si kastaba ha ahaatee wuxuu ku xirnaa batteriga habeenkii oo dhan saacadduna way kulul tahay laakiin ma shidna, maxaan sameyn karaa?
Isla sidaas oo kale ayaa igu dhacda
Dhibaato ayaan ku qabaa farriinta, markaan furo, waxay ku sii dhegan tahay rarka (wareegga sugitaanka) meeshaas wax kale ma qabato, maxaan sameyn karaa?
Waxaan ku jiray qorraxda aniga oo la socda Apple Watch iyo markaan rabo inaan arko waqtiga aysan sii shaqeynaynin! Wuu dhintay! Horey ayaan u raray oo wali ma shaqeynayo, wax jawaab ah kama bixineyso. Qofna ma i caawin karaa Ma doonayo inaan u sheego aabbahay.
Ku jawaab Maria Vega
Laga soo bilaabo shalay markii aan leexiyo curcurka ma shidan tahay
Ku jawaab Jonatan Vila Arissa
Waad salaaman tihiin. Saacaddayda tufaaxa ayaa si lama filaan ah bateriga ugu shubtay waqtiga rikoodhka, in ka yar 3 saacadood. Adigoon adeegsan wax app ah. Iyo sidoo kale, mar kasta oo ay madow noqoto oo aan doonayo inaan isticmaalo, waa inaan furaha furaha furaha furaha. Ma qof kale ayey ku dhacday ?? Mahadsanid
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa su'aal xalay fiirineysa shaashadda saacadeyda tufaaxa ma garanayo waxa aan riixay waxaana soo muuqday shaashad dhaheysa masax wax kasta oo casaan ah waxaan isku dayay inaan ka tago laakiin ma aanan awoodin waana sidii taleefanka gacantu ahaa go'ay isla shaashadduna way sii socotaa.
Salaan kadib xaalad ayaan ku haystaa saacaddayda tufaaxa, way kululaatay waxaanan galiyay shaashadda calaamadda kuleylka leh, ka dib markii wax lacag ah laga qaadin oo aysan shidanayn, kaliya marka la isku xidhayo waxay fiilada la dhigaysaa qaybta cagaaran ee amraya. laakiin ma daarto ama waxba
Ku jawaab harllenews
Tufaaxa ayaa soo muuqday waan ku xirayaa xeedhada waana uu dhawaaqa laakiin ma daarmayo mana ogi inay tahay xarigga ama saacadda
Ku jawaab johan manuel
Daniel Hourcade dijo
Ma daarmayo Apple Watch, goobaabin casaan leh ayaa leh astaamaha! (sidoo kale casaan) dhexda iyo ka hooseeya soo socda: http://www.apple.com/help/watch
Kujawaab Daniel Hourcade
hello aniga waan ku ekahay qaabka diyaarada waxna iima ogola in aan wax sameeyo, maxaa yeelay iskuma xirna ... qof ma i caawin karaa mise waa inaan aado dukaanka tufaaxa? Mahadsanid
Jawaab Rodrigo Rapela
sxb, saacada tufaaxu way xayirantay, iima ogola in aan xoog ku bilaabo, tan iyo markii aan riix batoonada 10 2 ilbidhiqsi, waxna ma dhacaan,
Had iyo jeer waxaan ugu isticmaalaa qaabka diyaaradda, markaan rabo inaan rakibona ma rarto?
caawin haddii ay awoodaan
mahadsanid hug weyn
Ku jawaab carlos irazoqui
Ma helin wax ogeysiis ah laba maalmood. Arbacadii ayay si kadis ah u demisey duhurkii (muddo saddex sano ah waa markii ugu horreysay ee ay qabato), anigu lacag baan saaray oo waxay umuuqatay inay fiicantahay; laakiin aniga ima xirayo iPhone-ka, wuxuu leeyahay wuu xiran yahay laakiin ma furo barnaamijyada mana arki karo isticmaalka saacadda iphone, waxaad moodaa in labada qalab aan la fahmin.
taydu way iska damisaa kaligeedna markasta oo aan taaban, ma garanayo sababta
Waad salaaman tihiin galab wanaagsan, iskudayo badan oo aan guuleysan ayaa si isdaba joog ah uga muuqda shaashadda Apple Watch, dib u daaya saacadda ka dibna isbarbar dhig. Laakiin wax kale igama jawaabo
Waxaan ku cusbooneysiiyay IWatch 3 illaa nooca 5 shaashaduna waxay noqotay monochrome
Jawaab Gustavo Boronat
Daawashadeyda aple waa taxane 1 markii aan rarto xoogaa kadib waxay ii sheegtaa iskudayo badan oo guuldareystay si aan markale isku xiro, anigana dhowr jeer ayaan xiriiriyay markalena way dhacday.
Ma jiidi karo, inta badan, liiska ogeysiiska iyo miiska batteriga. Ma ogtahay sababta ay noqon karto?
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, waxaan hayaa aw se cusub, waxaan geeyay adeegga farsamada Apple, waxay tijaabada ku sameeyeen laba saacadood iphone kale wax walbana waa hagaagsan yihiin, way igu dhacdaa hal mar maalintii wakhti kasta iyo wakhti kasta Xal ma aanan helin, xal ma lagu siiyay?
Ku jawaab angela
Waad salaaman tihiin maalin wanaagsan.
Waxaan u adeegsadaa saacadda aasaas ahaan barashada dabaasha, toddobaadkan si lama filaan ah qaabka dabaasha bilaashka ah, waxaan xaqiiqsaday halka ay tilmaamayso mitirrada aad dabbaalaneyso si lama filaan ah waxay gelisay qadar xad dhaaf ah 200000 oo mitir, 10 daqiiqo ayaan mar kale hubiyey mar dambena mardambe Waxba ma tusin, si fudud 0 mitir ama dheer, laakiin waa wax lala yaabo maxaa yeelay goor dambe markaad dhameyso kalfadhiga iphone-ka iyo isla saacadda haddii ay si fiican u muujiso, qof ma ii sheegi karaa waxa dhici kara iyo xalka.
taxanaheyga tufaaxa 3 wuxuu leeyahay shaashad madow laakiin wuxuu leeyahay batteri buuxa. Waxaan dareemayaa inay gariirto markaad farriinta gasho laakiin waxba ma arki karo
Ku jawaab ALE339
Haye, saacadaydu ma diiwaangeliso wax shaqo ah. Majiraan talaabooyin, garaaca wadnaha ama wax kale. Kadib wax walba wuu sameeyaa. Dib ayaan u bilaabay, tirtiray iyo waxkasta oo aan ka heli karay internetka. Fadlan waxaan u baahanahay caawimaad tan. Mahadsanid
Waxaan hayaa AW SE cusub bil ka hor, waxay igu dhacdaa markaan rabo inaan aado xarunta ogeysiinta iyo koontaroolka, ma heli karo, maxaa yeelay shaashadda kuma jiidi karo fartaada hoos ama kor, waa sidii shaashadda ayaa ku dheggan, wax walba inta hartay way shaqeynayaan, xitaa haddii aan dhinac u janjeero si aan u arko daboollo kale, wax walba waa hagaagsan yihiin, hoos iyo hoos u sii socoshada, tani waxay dhacdaa hal mar maalintii oo mar hore ayaan u geeyay adeegga idman ee tufaax laakiin iyagu khalad ma aysan helin, waxaan diidayaa in maalin kasta dib loo bilaabo si loo saxo. Fadlan caawi.
My Apple Watch Series 3 ma daari doono. Oo waxaad arkaysaa sadar cad oo saacadda ka sarreeya
Xalliyaan dhibaatooyinka xisaabeed ee kamaradda casrigaaga sida ay ku xalliyaan El Hormiguero